Nin Safray Seddax Kun Oo Mile Si Uu Ula Kulmo Gabar Uu Jeclaa Oo Uu Ku Bartay Internet-Ka Oo Helay Jawaabtii Ugu Qariibsaneyd | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Arimaha Bulshada » Nin Safray Seddax Kun Oo Mile Si Uu Ula Kulmo Gabar Uu Jeclaa Oo Uu Ku Bartay Internet-Ka Oo Helay Jawaabtii Ugu Qariibsaneyd
Nin Safray Seddax Kun Oo Mile Si Uu Ula Kulmo Gabar Uu Jeclaa Oo Uu Ku Bartay Internet-Ka Oo Helay Jawaabtii Ugu Qariibsaneyd
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 3-08-16 2:51 PM Haddii aad tahay qof jaceylka u nugul waxaa kugu fiicnaan laheyd in aadan maqal sheekadaan oo kale.
Wiilka lagu magacaabo Alexander Pieter Cirk ayaa jaceyl u qaaday gabar ay ku kulmeen online-ka. Ka dib laba bilood oo ay ku sheekeysanayeen online-ka gabadhaan, oo magaceeda ugu dambeeya lagu sheegay Zhang, wiilkaan Cirk ayaa go’aansaday in uusan waqti dheer sugin si uu ula kulmo gabadhaan wuxuuna doonayey inuu mar ay noqotaba si dhab ah indhaha ugu qabto gabadhaan. 41 sanno jirkaan u dhashay dalka Holland ayaa safray in ka badan seddax kulan oo miles si uu u gaaro garoonka diyaaradaha Changsha Huanghua International Airport ee dalka China. Wuxuuna muddo 10 cisho ah joogay garoonkaas diyaaradaha Changsha Huanghua International Airport si uu ula kulmo gabadhaan, laakiin Zhang marnaba ma aysan imaan halkaas. Xaqiiqada ayaa ah in uusan Cirk marnaba ka daalin inuu sugo jaceylkiisa isla markaana uusan isdhimin jaceylkiisu inkastoo uusan marnaba indhaha saarin gabadhaas, taasina waxay keentay in daal dartiis isbitaal loo dhigo ka dib markii uu in ka badan hal Isbuuc ku sugayey garoonka diyaaradaha. Zhang, ayaa densatay talefoonka sababtoo ah waxay mareysay markaas qaliin, waxayna goordambe u sheegtay warbaahinta maxalliga ah ee China: “Xiriir jaceyl oo horumar sameeyey ayaa naga dhexeeyey, laakiin maalmihii ugu dambeeyey waxay u muuqatay sida inuu sii xumaanayo xiriirkeenu.
“Maalin ayuu iisoo diray sawirrada tikidho diyaaradeed oo muujinaya inuu usoo socdo China, waxaana u maleeyey inuu ila kaftamayo. Wixii intaas ka dambeeyey xiriir ilama soo sameyn.”
Isagoo weli doob ah, Cirk wuxuu ku laabtay dalkiisa Holland ka dib markii isbitaalka laga soo saaray. Gabadhaan Zhang ayaa sheegtay in laga yaabo in uusan soo dhammaan xiriirka kala dhexeeya wiilkaan, waxayna sheegtay inay qorsheynayaan inay dib u kulmaan marka ay labadooduba si buuxda usoo kabsadaan.